» होस्टलमा बालबालिका : उचित कि अनुचित ?
११ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०७:४४
कति आमाबुवा बाध्यतामा र कति लहडमा आफ्ना बालबच्चालाई होस्टलमा राख्ने गर्छन् । अक्सर श्रीमान्-श्रीमती कामकाजी छन् । कति आमाबुवा विदेशमा पनि छन् । उनीहरु आफ्नो घरमा बस्न पाउँदैनन् । छोराछोरीसँग खेल्ने, रमाउने फुर्सद पनि छैन ।
अर्कोतिर धेरै दम्पती अहिले एकल परिवारमा छन् । संयुक्त परिवारबाट अलग भएर शहरमा आश्रय लिएका छन् । यस्ता अनेक वाध्यता र अवस्थाको कारण धेरै दम्पतीले आफ्ना बालबच्चालाई होस्टलमा पुर्‍याइदिएका छन् । बच्चाको खानपान, स्यहारसुसार सबै कुरा अर्काको हातमा सुम्पिएका छन् । निश्चित पैसा दिएर दम्पतीहरु ‘छोराछोरी हुर्काउने तनाव’बाट मुक्त भएका छन् ।
हो, धेरै दम्पतीलाई आफैले जन्माएको छोराछोरी हुकाउने कुरा तनाव भएको छ । झन्झटिलो भएको छ । बोझिलो भएको छ ।
कति अभिभावक त यस्ता पनि छन्, जो फुर्सदिला भएर पनि छोराछोरीलाई होस्टलमा राखिदिएका छन् । कतिले देखासेखीमा त कतिले बालबच्चालाई ‘तह लगाउन’ होस्टल पठाउने गरेका छन् ।
अभिभावकको यस्तै वाध्यता, प्रवृत्ति र लहडले निजी विद्यालयहरु होस्टल संचालन गर्ने होडबाजीमा लागेको छ । अहिले धेरैजसो निजी विद्यालयले होस्टलको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई उनीहरु ‘अतिरिक्त सुविधा’ अन्र्तगत अथ्र्याउने गर्छन् ।
अभिभावकलाई केही प्रश्न
अब यहाँ आइपुगेपछि अभिभावकसँग केही प्रश्न गरौं ।
के तपाईंलाई आफ्ना बालबच्चासँग बस्ने अनुकुलता वा फुर्सद नभएको हो ?
के तपाईंले बालबच्चाको पालनपोषण राम्ररी हुन्छ भनेर होस्टलमा पठाउनुभएको हो ?
के तपाईंले बालबच्चालाई ‘तह लगाउन’ होस्टलमा भर्ना गरिदिनुभएको हो ?
के तपाईंलाई आफ्नो बालबच्चा हुर्काउने काम झन्झटिलो भएको हो ?
उल्लेखितमध्ये कुनैपनि प्रश्नमा तपाईंले स्विकारोक्तीको टाउको हल्लाउन सक्नुहुन्छ । तर, बालबच्चालाई होस्टलमा राख्दा त्यसको असर के हुनसक्छ भन्ने कुरा सोच्नुभएको छ ? हुनसक्छ, तपाईं कसैको प्रभावमा परेर यस्तो काममा उक्सिनुभयो । वा आफ्नै परिस्थितीले गर्दा बालबच्चालाई होस्टलमा भर्ना गराउन बाध्य हुनुभयो । तर, यी सबै काम तपाईंको लागि हितमा नहुन सक्छ ।
बालबच्चा हुर्काउनु पनि झन्झट ?
अहिले त तपाईं बालबच्चा स्यहार्ने, हुर्काउने झन्झटबाट मुक्त हुनुभयो । उनीहरुलाई ख्वाउन, खेलाउन, पढाउन परेन । लुगा धोइदिनु परेन । ब्रस गराउने, नुहाइदिने केही काम गरिदिनुपरेन । बस्, मासिक शुल्क बुझाएपछि सबै झन्झटबाट तपाईं मुक्त हुनुभयो ।
तर, यसले कति भयानक असर गर्छ भन्ने कुरामा तपाईं घोत्लिनुभएन । मूल कमजोरी यही भयो ।
तपाईंलाई आफ्नै कोखको बच्चा हुर्काउन किन झन्झट ? किन असहज ?
आफ्नो बच्चा जन्माइसकेपछि उसलाई उचित वातावरणमा हुर्काउने, पालनपोषण गर्ने, शिक्षादिक्षा दिने दायित्व आमाबुवाको हो । बच्चालाई जन्माएर उनीहरुलाई गलत ढंगले हुर्काउनु वा उचित स्यहार सुसार नगर्नु भनेको तपाईंको कमजोरी हो ।
होस्टल बालमैत्री हुन्छ ?
कमजोरी किनभने, बालबच्चाका लागि उपयुक्त ठाउँ होइन होस्टल । व्यवसायिक प्रयोजनले खुलेका यी होस्टल बालमैत्री हुँदैन पनि । यस्ता होस्टलमा उनीहरु उन्मुक्त खेल्न, रमाउन, कुरा गर्न सक्दैन । किनभने उनीहरु त्यहाँ चौबिसै घण्टा निगरानीमा हुन्छन् । उनीहरुमाथि अनेक हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुन्छ । अझ अनुशासनको नाममा बालबालिकालाई यसरी बाँध्ने गरिन्छ, जो अदृश्य कारागार जस्तै हो ।
खासमा भन्ने हो भने, बालबालिकालाई होस्टलमा त्यसरी हुर्कने अनुकुलता हुँदैन, जो उनीहरुलाई आवश्यक हुन्छ । उनीहरु बच्चा हुन् । बालशुलभ चञ्चलता हुन्छ । उत्सुकता हुन्छ । यस्तै चञ्चलता र उत्सुकताले गर्दा उनीहरुलाई केही न केही गर्न उक्साउँछ ।
यसलाई हामी ‘चकचक गरेको’ भन्छौं । यस्तो ‘चकचक’ले नै बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकास समूचित ढंगले हुनमा सहयोग गर्छ । तर, जब बालबालिकालाई अर्काको आश्रयमा जिम्मा लगाइन्छ, तब उनीहरुलाई यी सबै गर्न बन्देज लगाइन्छ । निषेध गरिन्छ । उनीहरु अनुशासनको नाममा रोबोट जस्तै हुनपुग्छन् ।
आमाबुवाको स्नेह र स्पर्शबाट किन बिमुख ?
साना बालबच्चाका लागि होस्टल उपयुक्त ठाउँ होइन ।
किनभने यतिबेला उनीहरुलाई आफ्नै आमाबुवाको सामिप्य चाहिन्छ । आमाबुवाको न्यानो स्पर्श चाहिन्छ । यो उमेर उनीहरु होस्टलमा खुम्चिएर बस्ने होइन, उन्मुक्त भएर आफ्नै घर-आँगनमा खेल्ने हो ।
बच्चालाई आफ्नो आमाबुवाको आत्मिय स्पर्श चाहिन्छ । आमाबुवाको अगाडि उनीहरु जति खुसी हुन्छन्, जति रमाउँछन्, जति स्वतन्त्र महसुष गर्छन्, जति सुरक्षित अनुभव गर्छन्, अरुको अगाडि त्यस्तो गर्न सक्दैनन् ।
बुवाआमाको सामुन्ने उनीहरु निर्धक्कसाथ सबैकुरा गर्न सक्छन् । तर, अरुको निगरानीमा उनीहरुले आफैलाई खुम्चाउँछन् । मन लागेको कुरा पनि गर्दैनन् । देखावटी मात्र गर्छन् । उनीहरु त्यस उमेरमा जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुँदैनन् ।
छोराछोरीसँग भावनात्मक दुरी
अर्कोतिर सानै उमेरमा यसरी बालबालिकालाई होस्टल राखेपछि आमाबुवासँग उनीहरुको दुरी बढ्छ । यो भौतिक मात्र होइन, भावनात्मक दुरी पनि हो । जति जति उनीहरुको समय होस्टलमा बित्दै जान्छ, आमाबुवासँगको भावनात्मक सम्बन्ध पनि खुकुलो हुँदै जान्छ । अन्ततः आमाबुवा र छोराछोरीबीच जुन किसिममो भावनात्मक अट्याचमेन्ट हुनुपर्ने हो, त्यो हुँदैन ।
बालबच्चा आमाबाबुवाट विमुख हुँदै गएपछि घर-परिवारसँग उनीहरुको घनिष्ठता टुट्छ । जब उनीहरु हुर्कन्छन्, आमाबुवासँग उनीहरु एकाकार हुन सक्दैनन् । आफुलाई आमाबुवाले कसरी हुर्काए, कसरी पढाए, कसरी पालनपोषण गरे भन्ने कुरा उनीहरुले अनुभूत गर्नै पाउँदैनन् । अन्ततः उनीहरुलाई आफ्नै आमाबुवा पनि पराई लाग्न सक्छ ।
घरः एक खुला विश्वविद्यालय
बालबच्चाले विद्यालयमा मात्र सबै कुरा सिक्दैनन् । होस्टलमा राखेर मात्र उनीहरु बौद्धिक वा शिक्षित हुँदैनन् । खासमा त घर परिवार नै उनीहरुको लागि खुला र विशाल विद्यालय हो । ज्ञान-भण्डार हो । घरमा बालबालिकाले धेरै कुरा बुझ्ने, सिक्ने, अनुभव गर्ने अवसर पाउँछन् ।
बालबच्चालाई होस्टल राखेपछि बच्चाहरु परिवारबाट बिच्छेद हुन्छन् । परिवारबाट बिच्छेद हुनु भनेको जीवनमा धेरै कुरा सिक्ने र बुझ्ने अवसर गुमाउनु पनि हो । उनीहरुले आफ्नो पारिवारिक संस्कार, व्यवस्था आदि सिक्न पाउँदैनन् । बुझ्न पाउँदैनन् ।
खासमा आमाबुवासँग हुर्कन पाउँदा, घरभित्र बस्न पाउँदा बालबच्चाले थाहै नपाई धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन्, जो निकै जीवनोपयोगी पनि हुन्छ । घर व्यवहारका कुरा, खानपानका कुरा, लुगाफटाको कुरा, सरसफाईको कुरा, बगैंचाको कुरा बच्चाले घरबाटै सिक्ने हो ।
आफन्त, नातागोता केलाउने तथा उनीहरुसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्छन् । तर, जब उनीहरुलाई परिवारबाट बिमुख बनाइन्छ, उनीहरुले जीवनमा सिक्नैपर्ने थुप्रै कुरा सिक्न पाउँदैनन् ।
त्यसैले बालबालिकालाई होस्टलमा राख्नु बाध्यता भएपनि त्यसको असर भने निकै नराम्रो हुन्छ । सकेसम्म बालबालिकालाई आमाबुवाले आफैसँग राख्ने, पारिवारिक वातावरणमा हुर्काउने गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई आफ्ना आमाबुवाको माया, ममता, स्पर्शको खाँचो हुन्छ ।
बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य तालिमको पुनःताजगी तालिमको समापन
‘बाराका हावाहुण्डरी प्रभावित बालबालिका तथा महिलाहरुमा मनोसामाजिक समस्या देखा पर्दै’
मिथिला नगरपालिकामा बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य तालिमको समापन
मिथिला नगरपालिकामा बालबालिका तथा किशोरकिशोर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि तालिम शुरु